व्यस्त हुनुहुन्छ? किन चिन्ता 'यसरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरौन' | मेरो कलम
कामकाजले ईन्टरनेटमा वस्ने फुर्सदै छैन । वल्ल तल्ल फुर्सद त निकालिन्छ तर कुन साईट हेरिभ्याउनु ? फेसवुकमा अपलोड गरेको फोटो/स्टाटसमा के-कस्तो लाईक,कमेन्ट आएको छ त्यो थाहा पाउन हतार भईसक्यो । ट्वीटरमा के कतिले फलो गरे, के भनेर मेन्सन गरिएको छ, कस्ता म्यासेज आएका छन् त्यो पनी हेरिहाल्नुपर्ने छ । ईमेल चेक गरेर तुरुन्त रेस्पोन्स गर्नुपर्नेछ । छोटो समयको बावजुतपनी एकै पटक कसरी सबै साईट भिजिट गरिसक्ने ? यस्तै हतार र व्यस्ततामा ईन्टरनेट चलाउदै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागी उपयुक्त साईट Hoot Suite: Social Media Management हुनसक्छ । तपाईको महत्वपुर्ण समयलाई Hoot Suite ले महत्वका साथ सहयोग गर्नेछ ।
मज्जा छैन त ?
Hoot Suite मा लगईन गरेर Twitter हेदैछु । मेरो ट्वीटर यस्तो देखिएको छ । एकै पेज स्त्रिनमा फिड, मेन्सन र म्यासेज । ट्वीटर/मेन्सन गर्नुपर्दापनी Hoot Suite वाटै सहजै रुपमा गर्न सकिन्छ । फेरी ट्वीटरको साईटमा फर्किरहनु नै पदैन ।
यस्तै फेसवुकमा पनी कस्तो न्युज फिड आईरहेको छ , फोटो/स्टाटसमा के कस्तो लाईक/कमेन्ट छ, कुन पेजले के अपलोड गदैछ सवैकुरा एकै स्त्रिनमा देख्न सम्भव छ । अर्को फाईदा के पनी छ भने Hoot Suite को प्रयोग गरिरहदा अन्य धेरै साईट खोलिरहन पदैन । फेसवुक ट्वीटर त मात्र उदाहरण हुन् । ल हेर्नुस Hoot Suite ले यति धेरै क्षेत्रमा Social Media Management को काम गर्दै आएको छ :
HootSuite would like to access your public profile, friend list, email address, News Feed, relationships, relationship interests, birthday, notes, status updates, checkins, education history, events, groups, hometown, interests, current city, photos, religious and political views, videos, website, personal description, likes and your friends’ relationships, relationship interests, birthdays, notes, status updates, checkins, education histories, events, groups, hometowns, interests, current cities, photos, religious and political views, videos, websites, personal descriptions and likes.
विश्वमा दशौ लाख मानिसले Hoot Suite प्रयोग गरिरहेका छन् । कम्प्युटरमा मात्रै हैन Hoot Suite को एप्स मोवाईलमा पनी प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल लगायतका साईट प्रयोगलाई सहज वनाउन सकिन्छ । अनि अर्को कुरा तपाई कति वटा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? पाचँ भन्दा वढी साईट त चलाउनु हुन्न होला नी हैन ? त्यसो हो भने निशुल्क Hoot Suite को सेवा लिन सक्नुहुन्छ । यदि पाचँभन्दा वढी सामाजिक सञ्जाल लगायत साईटको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने चै मासिक करिव १० डल्लर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
ok i will do it from today. Thanx for the information bro